Androgens သည် Penile Tissue Architecture and Erection: A Review (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အဓိကအခန်းကဏ္ Play မှပါဝင်သည်
တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2009): အန်ဒရိုဂျင် penile တစ်ရှူးဗိသုကာနှင့်စိုက်ထူထိနျးသိမျးအတွက်မဏ္ဍိုင်အခန်းက္ပ Play
တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: အန်ဒရိုဂျင် penile တစ်ရှူးဗိသုကာနှင့်စိုက်ထူထိနျးသိမျးအတွက်မဏ္ဍိုင်အခန်းက္ပ Play
ABDULMAGED အမ် TRAISH
ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့် Urology, ဆေးပညာဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, ဘော်စတွန်, မက်ဆာချူးဆက်၏ဦးစီးဌာနများအနေဖြင့်။
စာပေးစာယူမှ: ဒေါက်တာ Abdulmaged အမ် Traish, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့် Urology ပါမောက္ခ, ဒါရိုက်တာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအဘို့ဓာတ်ခွဲခန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအင်စတီကျု, ဆေးပညာဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, အဆင့်မြင့်ဇီဝဆေးပညာသုတေသနစင်တာ, 700 အယ်လ်ဘာနီစိန့်, W607 ဘော်စတွန်, MA 02118 ( e-mail,: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]).
ထုတ်ဝေဇွန်လ 13, 2008 များအတွက်လက်ခံရရှိ; ထုတ်ဝေစက်တင်ဘာလ 17, 2008 များအတွက်လက်ခံခဲ့သည်။
အန်ဒရိုဂျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ကြီးထွားမှု, နှင့် maintenanceof penile ဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, multiplemechanisms အားဖြင့် erectile ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုထိန်းညှိ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ erectiletissue ဗိသုကာနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်အန်ဒရိုဂျင်မော်ဂျူနှငျ့ပတျသကျသော basicresearch တွေ့ရှိချက်တစ်ခုစုံစုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသညျ။ erectilephysiology အတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှညွှန်ပြ evidenceexists ၏သိသာထင်ရှားသောခန္ဓာကိုယ်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာရေးအခြေခံဆယ်လူလာတစ်ရှူး architectureand ပြောင်းလဲပစ်အတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်အသိပညာ, မော်လီကျူးများနှင့်ဇီဝကမ္မယန္တရားများပံ့ပိုးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ရှိသူများထံမှ Basedon ဒေတာ, အရံ penile အာရုံကြောကွန်ယက်ကို, အ corpora cavernosa များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိရှိသည့် tunicaalbuginea, နှင့်လိုဏ်ဂူနေရာများ၏ endothelium ၏ thestructure နှင့် function ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ androgens ကြောင်း webelieve ။ ထို့ပြင်အန်ဒရိုဂျင် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားထဲသို့ differentiationof ရှေ့ပြေးဆဲလ်တွေထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ penile function ကိုပြောင်းလဲပစ်အတွက် penile တစ်ရှူး architecturalelements ထိန်းညှိအတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏ therole နှငျ့ပတျသကျသောတွေ့ရှိချက်ပေါ်မှာငါတို့ဆွေးနွေးမှုကိုအာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာကုသရန်ဖို့ clinicalsetting အတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏အလားအလာအသုံးပြုမှုပေါ်မှာဤအသိပညာ hasa လေးနက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု။
Key ကိုစကားလုံးများကို: Andropause, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ဟော်မုန်း, လိင်တံ, adipogenesis, အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့, Corpus cavernosum, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, ချောမွေ့ကြွက်သား
ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်း View (24K):
[ဒီ window တွင်]
ပုံ 1 ။ penile စိုက်ထူ၏ယန္တရား။ အဆိုပါ flaccid ပြည်နယ်ထဲမှာ, cavernosal သွေးလွှတ်ကြောနှင့် helicine arterioles ကန့်သတ်သောအသွေးကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သည် (မှောင်မိုက်ပါးလွှာအနီရောင်မြှား) ၏ vasoconstriction ။ norepinephrine နှင့်ထိုကဲ့သို့သော endothelin ကဲ့သို့သောအခြားဒေသခံ vasoconstrictor အေးဂျင့်အားဖြင့် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သား၏ contractility အဆိုပါ lacunar နေရာများသွေးစုဆောင်းခြင်းခွင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ချောမွေ့ကြွက်သား contractility အဆိုပါ Tunica albuginea (အလင်းထူစိမ်းပြာမြှား) ဆန့်ကျင် subtunical venules ချုံ့ခွင့်မပြုဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်သွေးထွက်သွားအတားမရှိဖြစ်နေဆဲပင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအပေါ်သို့, အ nonadrenergic-noncholinergic အာရုံကြောဟာ cavernosal သွေးလွှတ်ကြောနှင့် helicine arterioles dilates နှင့် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားပြေစေပြီးအရာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (NO) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းလှုံ့ဆော်ခြင်း။ တိုးလာသည်သွေးလွှတ်ကြောအသှေးကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သည် (မှောင်မိုက်ထူအနီရောင်မြှား) နှင့်အောက်စီဂျင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအား (PO2) ၌ဤ neurovascular ဖြစ်စဉ်ကိုရလဒ်များကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25-40 မီလီမီတာ Hg ထံမှ 90-100 မီလီမီတာ Hg ဦးအထိမြင့်တက်။ ဤသည်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ထပ် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအတွက်နောက်ထပ်အပန်းဖြေမှုအရာမဟုတ်ပါ, synthesize ဖို့ endothelial နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (ဧနုတ်သည်) ကိုလှုံ့ဆျော။ ဤသည်မှာအရှင်ဆန့်နှင့် occluding အဆိုပါဖျန် venules နှင့်သွေးထွက်သွား (အလင်းပါးလွှာစိမ်းပြာမြှား) လျှော့ချခြင်း, Tunica albuginea ဆန့်ကျင်တပ်ကြပ်တိုးချဲ့စေပါတယ်။ တပ်ကြပ်သွေးပြန်ကြောထွက်သွား occluded အတိုင်း, တပ်ကြပ်ဖိအားမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကုန်းပြင်မြင့်ရောက်ရှိ, အရှင်လိင်တံ engorging ။ မှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်အရောင်ကိန်းဂဏန်း www.andrologyjournal.org.
Corporate veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အရေးပါသောအကြောင်းရင်း oforganic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်နှင့် intracavernous ဆားပြုတ်ရည် (Hatzichristouet အယ်လ်အားဖြင့်စိုက်ထူ၏ clinicalevaluation စဉ်အတွင်းစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်ဖို့ needfor တိုးမြှင့်စီးဆင်းမှုနှုန်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် 1995, 1999; Nehra et al, 1996, 1998; Udelson et al, 1998; Mulhall et al, 2004) ။ Corporate veno-occlusive dysfunctionalone သို့မဟုတ်သွေးလွှတ်ကြောရောဂါနှင့်အတူပေါင်းစပ် (intracavernous pharmacotherapy တုံ့ပြန်မရှိခြင်းဖြစ်စေတဲ့တိကျတဲ့ hemodynamicabnormality ဖြစ်ပါသည်Rajfer et al, 1988; Mulhall et al, 1997; Aversa et al, 2003;Wespes et al, 2005; ဟွမ် et al, 2006) ။ concomitantarterial နှင့်အကှေ့ချောမွေ့ကြွက်သားရောဂါ၏တည်ရှိမှုရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ဆက်ဆံဖို့ veno-occlusivedysfunction မကြာခဏခက်ခဲစေသည်။
Nehra et al (1996, 1998) စုစုပေါင်း erectile tissuearea မှ trabecular ချောမွေ့ကြွက်သား၏ရာခိုင်နှုန်း (ထပ်-ဟောဒီမှာ pharmacocavernosometry သုံးပြီး preoperative ခုခံ venousoutflow စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ indicesof veno-occlusive function ကို (စီးဆင်းမှု, နဲ့ဖိအားယိုယွင်းတိုင်းတာစုံစမ်းစစ်ဆေး) နှင့်ထိုအ parameters တွေကို erectile တစ်ရှူးကွန်ပျူတာ-ကူညီအရောင် histomorphometry withpostoperative ဆက်နွယ်နေကြောင်း ) ။ အဆိုပါစာရေးဆရာ corporealveno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ pathophysiology, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် increasedconnective တစ်ရှူးအစစ်ခံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ချောမွေ့ကြွက်သားအကြောင်းအရာလျှော့ချကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
erectile function ကိုနှင့် someprogress ၏ regulatingthe ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးအခြေခံအတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုသတ်မှတ်နားလည် laboratoriesto တစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ကြပြီအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းထားပြီးဖြစ်သော်လည်းအများအပြားကွာဟချက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် cavernosal integrityof နှင့် dorsal အာရုံကြောထဲမှာအန်ဒရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္ဍ, တိုးတက်မှုနှင့်ချောမွေ့ကြွက်သား functionof နှင့် connective တစ်ရှူးဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့် attenuationof fibrosis ၏ endothelium andmaintenance ၏ function ကို includethe ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ (erectile function ကို actionin အန်ဒရိုဂျင်တစ်ခုအလုပ်လုပ်မော်ဒယ်ကိုတင်ပြပုံ 2) ။ ဒီမူဘောင်အသုံးပြုခြင်း, 1 အပါအဝင် penile ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္ဍကို wediscuss) ရံအာရုံကြော, 2) trabecular ချောမွေ့ကြွက်သား, 3) ရှေ့ပြေး pluripotent ဆဲလ်များ၏ကွဲပြားခြားနားမှု smoothmuscle သို့ 4) သွေးကြော endothelium နှင့် 5) Tunica albuginea andconnective တစ်ရှူး။
ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်း View (43K):
ပုံ2။ erectile function ကိုအတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏အက်ရှင်များအတွက်အဆိုပြုမူဘောင်။ testosterone5မှ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက် -dihydrotestosterone (5 အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) အတွက်ပိုမိုမြင့်မားဆှဖှေဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ -DHT) ။5-DHT နှင့် testosterone ဟော်မုန်းချည်နှောင် AR နှင့်အတော်ကြာဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအချက်ပြတဲ့အိမ်ရှင်ထုတ်ယူ။ ဤရွေ့ကား) 1 ပါဝင်သည်ကို up-စည်းမျဉ်း၏) phosphodiesterase type ကို2(PDE 5) ၏စကားရပ်တိုးလာနှင့် 5) 3, အာရုံကြောနှင့် endothelial နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthases (nNOS နှင့်ဧနုတ်သည်) ၏စကားရပ်တိုးလာ -1 adrenergic receptors ဆင်း-စည်းမျဉ်း Rho တစ် kinase ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အန်ဒရိုဂျင်ဟာ penile အာရုံကြောအမျှင်ကွန်ယက်နှင့်ချောမွေ့ကြွက်သားတိုးတက်မှုနှင့် function ကို၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိစောငျ့ထိနျး။ တစ်သျှူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိရှိနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအချက်ပြ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု veno-occlusive function ကိုနှင့် penile စိုက်ထူဘို့အရေးကြီးသည်။ မှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်အရောင်ကိန်းဂဏန်း www.andrologyjournal.or
အန်ဒရိုဂျင် penile Cavernosal နှင့် Dorsal အာရုံကြောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရာထူးအမည်ထိန်းသိမ်းပါ
အန်ဒရိုဂျင် (တင်ပါးဆုံတွင်း ganglia ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို modulateMeusburger နှင့် Keast, 2001; Keast et al, 2002) ။ Giuliano et al (2004) အန်ဒရိုဂျင် postganglionic parasympathetic အာရုံခံအပေါ်သရုပ်ဆောင် functionby erectile modulate ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ Armaganet အယ်လ် (2007) ကို dorsal အာရုံကြော၏ castrationaltered ဖွဲ့စည်းပုံကအန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ပြသခဲ့သည်။ ဤ (et al Baba ဖွငျ့သူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်း observationis2000a,b) whichcastration အတွက် cavernosal နှင့် dorsalnerves အတွက် NADPH အစွန်းအထင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ဆင့် fibersto သည်ဤအာရုံကြောပြန်၏။ ရော်ဂျာ et al (2003) ကိုလည်းသရုပ်ပြ thatcastration အဆိုပါ dorsal အာရုံကြောနှင့် resultedin သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းသင်းအောက်ပါ testosterone ကုသမှုသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်တားဆီးနှင့်နဂိုအတိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏သူတို့အားအလားတူတန်ဖိုးများ intracavernosalpressure ပြန်၏။ စိတ်ဝင်စားစရာ, (သွေးကြော endothelial growthfactor (VEGF) နဲ့ castrated တိရစ္ဆာန်များ၏ကုသမှုကိုအာရုံကြောတည်ဆောက်ပုံကဲ့သို့ပကတိနှင့် veno-occlusive function.Because အန်ဒရိုဂျင် VEGF စကားရပ်ကိုထိန်းညှိဖို့ပြသပြီHaggestrom et al, 1999), က Corpus cavernosum synthesisin VEGF castrated animalsand testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုကိုဆင်း-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းဖြစ်နိုင် VEGF ပေါင်းစပ်, Corpus cavernosum အပေါ်အရှင် mediatingthe အန်ဒရိုဂျင်-မှီခိုသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။
Orchiectomy အဆိုပါ pelvicnerve ၏လျှပ်စစ်လယ်ကိုဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်း intracavernosalpressure အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်ပြောင်းပြန်ခဲ့ suggestingthat testosterone ဟော်မုန်း (penile စိုက်ထူထိန်းညှိသည့် peripheralnerve ကွန်ယက်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍSimpson နှင့်မာရှယ်, 1908; Muller et al, 1988; Heaton နှင့် Varrin, 1994; Mills က et al, 1994; Bivalacqua et al, 1998; Traish et al, 1999; Palese et al, 2003; ဆူဇူကီး et al, 2007) ။ ထို့ပြင်ဆူဇူကီး et al (2007) demonstratedthat, castrated တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဖျက်သိမ်းမဟုတ် butwere လျှော့ချခဲ့ပြီးသော cavernosal အာရုံကြော၏ electricalstimulation အားဖြင့်ရူးနှမ်းအဆိုပါ erectile တုံ့ပြန်မှုမတူဘဲထဲမှာ, medial preoptic ၏လျှပ်စစ်ဆွခြင်းဖြင့် responseselicited erectile သင်းအောက်ပါဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝ restoredafter testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးခဲ့ကြသည် areawere ။
အန်ဒရိုဂျင် penile Trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရာထူးအမည်ထိန်းသိမ်းပါ
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (penile trabecularsmooth ကြွက်သား erectilefunction ထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုတည်ရှိSaenz က de Tejada, 2002) ။ အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့ဖို့နောက်ဆက်တွဲကတော့ smoothmuscle အတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း themolecular နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲများ၏အတိအကျသဘောသဘာဝ, သို့သော်, အမည်မသိနေဆဲဖြစ်သည်။
ခွဲစိတ်သို့မဟုတ် medicalcastration အားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့, (trabecular smoothmuscle အကြောင်းအရာအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးနှင့် extracellular connectivetissue matrix ကိုတိုးအစစ်ခံထုတ်လုပ်Traish et al, 1999) ။ tissuearchitecture အတွက်ဤပြောင်းလဲမှု (တင်ပါးဆုံတွင်းအာရုံကြောနှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန် intracavernosal ဖိအားလျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Simpson နှင့်မာရှယ်, 1908; Muller et al, 1988; Takahashi et al, 1991; Heaton နှင့် Varrin, 1994; Mills က et al, 1994; Bivalacqua et al, 1998; Traish et al,1999, 2003; Palese et al, 2003; ဆူဇူကီး et al, 2007) ။ ထို့အပွငျ trabecular ချောမွေ့ကြွက်သား documentedthat castrated တိရိစ္ဆာန်များကနေတစ်ရှူးအတွက် ultrastructural လေ့လာမှုများ (cytoplasmic vacuoles ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များနှင့်အတူစနစ်တကျထင်ရှား cytoplasmic myofilaments ၏ပမာဏလျော့နည်းသွားPersson et al, 1989; Traish နှင့်ကင် 2005;Traish နှင့် Guay, 2006; Traish et al, 2007) ။ အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းမှရရှိလာတဲ့ smoothmuscle ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုရှေ့ပြေးဆဲလ် (ထံမှ Programs ဆဲလ်အသေခံ, connective တစ်ရှူးအစစ်ခံနှင့် adipocyte ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် toan တိုးရတာလဲShabsigh et al, 1998; Traish et al, 2005) ။ ကော်လာဂျင် fibrils ၏အဓိကအားဖွဲ့စည်း extracellularmatrix ၏ erectile dysfunctionwere ချောမွေ့ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလူနာအစီရင်ခံ penile tissuestructural features တွေအတွက်တချို့ကမှတ်သားလောက်ပွောငျးလဲ။
specificstaining နှင့်အတူ histologically အကဲဖြတ်သည့် connective တစ်ရှူး relativeto အဆိုပါ corpora cavernosa ၏ချောမွေ့ကြွက်သားအကြောင်းအရာ, ဆက် tissueratio ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့ကြွက်သားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ connective တစ်ရှူး matrix ၏ trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအကြောင်းအရာ concomitantwith တိုးလာအစစ်ခံ expectedto အသီးအနှံတစ်ရှူး fibrosis ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ erectile erectiledysfunction နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်လက်တွေ့တွေ့ရှိချက်များ dysfunction.The ပြင်းထန်မှု corporalsmooth ကြွက်သား (Nehra et al ၏လျော့ချတစ်ရှူးအကြောင်းအရာဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရသည်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်း 1996, 1998; Wespes et al, 1997, 1998) ။ ED နှင့်အတူယောက်ျားကနေတစ်ရှူးထဲမှာ, ချောချောမွေ့မွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တစ်လျှောက်လုံးကိုတွေ့ကျဲ glycogen particlesand စုပေါင်း mitochondria နှင့်အတူ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် concomitant exhibitedaltered ။ အဆိုပါအရေးပါ pleomorphic ပုံသဏ္ဍာန်ပြသနှင့်ဆဲလ်-ဆဲလ် contactswere လျော့နည်းသွားသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ, trabecular ချောမွေ့ကြွက်သား contentalters penile fibroelastic ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အစားထိုးကျဆင်းမှု concomitantwith thatincreased ကော်လာဂျင်အကြောင်းအရာ (ဥပမာ, connective တစ်ရှူး) အကြံပြု (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုထုတ်လုပ်လျှော့ချ penile သွေးစီးဆင်းမှုအတွက်လိုက်နာမှုနှင့်ရလဒ်များကိုလျော့ကျစေပါတယ်Persson et al, 1989; Mersdorf et al, 1991).
အန်ဒရိုဂျင် Trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားထဲသို့ Pluripotent ရှေ့ပြေးဆဲလ်များ၏ခြားနားထိန်းညှိ
တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အထူးသဖြင့် subtunicalregion အတွက် penile တစ်ရှူးအတွက် accumulationof adipocytes မှု (Traish et al, 2005) ။ testosterone အစားထိုး restorednormal cavernosal histological အသွင်အပြင်။ အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိ tissuealterations တင်ပါးဆုံတွင်းအာရုံကြောနှိုးဆွ pressurefollowing intracavernosal လျော့နည်းသွားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အခြားသူများ (diabeticanimals ၏ penile တစ်ရှူးအတွက် adipocytes ၏ notedthe စုဆောင်းခြင်းများTraish နှင့်ကင်မ် 2005; Kovanecz et al, 2006) ။ ဆီးချိုရောဂါအန်ဒရိုဂျင်စောင်ရေလျော့နည်းသွားနှင့်ဆက်စပ်သည်ကို ထောက်. , က adipocytes ၏ထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းခြင်းဆယ်လူလာကွဲပြားခြားနားမှု၏အန်ဒရိုဂျင်ထိန်းချုပ်မှု causedby အရှုံးကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ အလားတူပဲအီစထိုဂျင်လှုပ်ရှားမှု knownto အပိုင်ဖြစ်သောအနည်းတစ်ဦးနှင့်အတူအထီးတိရစ္ဆာန်များ၏ကုသမှုကိုလည်း corpora cavernosa (မွန်း et al အတွက် accumulationof adipocytes အတွက်ရလဒ် 2001, 2004) ဒီအီစထိုဂျင်ပု Corpus cavernosum actionin အန်ဒရိုဂျင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းနှင့် adipocytes သို့ precursorpluripotent ဆဲလ်များ၏ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပေါ်စေမည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Goyal et al (2005a,b; 2007a,b) လှပသော2နှစ်အရွယ် animalswith အီစရိုဂျင်ကုသရင့်ကျက်တိရိစ္ဆာန် ofthe အဆိုပါ corpora cavernosa အတွက် adipocytes ၏လျှော့ချပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း levelsand စုဆောင်းခြင်းအတွက်ရလဒ်ကြောင့်သရုပ်ပြပါပြီ။ Bhasin et al (2003) အန်ဒရိုဂျင် adipocytes သို့ချောမွေ့ muscleand တားစီးကွဲပြားခြားနားမှုသို့ pluripotent ဆဲလ်များ၏ကွဲပြားခြားနားမှုထိန်းညှိကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဤသည်နောက်ထပ် (Singh က et al ၏တွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံ hypothesiswas2003, 2006), ချောချောမွေ့မွေ့ကြွက်သားများနှင့် adipogenesis areandrogen-မှီခို၏တားစီးသို့ pluripotentcells ၏ကွဲပြားခြားနားမှုသရုပ်ပြတဲ့သူ။ ကျနော်တို့ Tunica albuginea နှင့် cavernosal အလောင်းတွေအကြား Interface ကို corporo-occlusive မှကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, adipocytesin ၏စုဆောင်းခြင်း postulated ။
အန်ဒရိုဂျင်သွေးကြောဆိုင်ရာ Endothelial ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရာထူးအမည်ထိန်းသိမ်းပါ
ထိုကဲ့သို့သောတစ်ပြိုင်တည်းပဲ, endothelin, platelet-derivedgrowth အချက်နှင့်ပြောင်းလဲကြီးထွားအချက်β1အဖြစ် NO andparacrine အချက်များ, ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့်သွေးကြော endothelium modulatescorpus cavernosum ချောမွေ့ကြွက်သားသေံ [TGF-β1] (ကကောင်းစွာတည်တတ်၏Moreland, 2000; Bivalacqua et al, 2003, 2005; ရှောလမုန်သည် et al, 2003; Guay 2005, 2007; Musicki နှင့်ဘားနက်, 2007; watts et al, 2007) ကို endothelium အပေါ် .Various ကဲ့ရဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ, ischemia, hypoxia နှင့် arteriosclerosis) (function ကိုပွောငျးလဲရာတစ်ခုတိုးချဲ့သို့မဟုတ် paracrine အချက်များ၏ decreasedlevel ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေ growthof စေခြင်းငှါMoreland, 2000) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု byLu et al (2007) castrationor5ကအန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့သရုပ်ပြ အီလက်ထရွန် microscopy ကဆုံးဖြတ်အဖြစ် -reductase inhibitor ကုသမှုသည် endotheliumstructure ပျက်စီးမှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ endotheliumfrom နဂိုအတိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ regularultrastructural features တွေနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့မျက်နှာပြင်များပြသ။ အဆိုပါ castrated animalshad ကြမ်းနှင့် protuberant မျက်နှာပြင်ကနေ endothelium နှင့် irregular.The ဆဲလ်-ဆဲလ်အဆက်အသွယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်နှင့် endothelium ၏မျက်နှာပြင်မှအနီရောင် bloodcells ၏ကော်မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ အနည်းငယ်တွေ့ရှိရပါသည်ဒီလေ့လာမှုကနေ noticeable.The ဒေတာကျန်ရှိသောနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း endothelialstructural သမာဓိရှိပွနျလညျထူထောငျ castrated တိရိစ္ဆာန်များသို့ Administrationof testosterone ဟော်မုန်း, အန်ဒရိုဂျင်သွေးကြော endothelial ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု deficiencyproduces ကြောင်းအကြံပြုနှင့် endothelial structuralintegrity အန်ဒရိုဂျင်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်။ Akishitaet အယ်လ် (2007) ultrasonography သုံးပြီး brachial သွေးလွှတ်ကြောများ၏စီးဆင်းမှု-mediated vasodilation (FMD) ၏ယူခဲ့တိုင်းတာခြင်း outpatientswho 187 ဆက်တိုက်အထီးအတွက်စုစုပေါင်းနှင့် freetestosterone သိသိသာသာရာခိုင်နှုန်း FMD ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်, ထိုသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ဤသည်မှာဆက်စပ်မှုအသက်, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း, သွေးတိုးရောဂါ, hyperlipidemia, များတွင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, endothelium အပေါ် endogenous testosterone ဟော်မုန်း၏ suggestinga အကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
endothelial ဒဏ်ရာ၏ပွနျလညျထူထောငျသို့မဟုတ်အသစ်ပြန်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မတန်မီပျံ့နှံ့နေတဲ့ progenitor ဆဲလ် (PC များ) ၏ရေကူးကန်ပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာမူတည်နှင့်ရင့်ကျက် endothelial progenitor ဆဲလ် (EPCs) ပျံ့နှံ့နေတဲ့ .Foresta et al (2006, 2008) hypogonadotropic hypogonadismon PC များနှင့် EPCs နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် prolongedtestosterone ကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အဆိုပါစာရေးဆရာ hypogonadal patientshad PC များနှင့် EPCs ၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချနှင့် testosterone ဟော်မုန်းသည်ဤဆဲလ်တွေအတွက်သိသိသာသာတိုးအတွက် therapyresulted ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ hypogonadism လျှော့ numbersof ပျံ့နှံ့နေတဲ့ PC များနှင့် EPCs နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်း authorsconcluded ။ ထိုပြန့်ပွားတိုး, ရွှေ့ပြောင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင်အားဖြင့်သွေးဆောင် EPCs ၏ကိုလိုနီ-ဖွဲ့စည်းရေးလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခု AR-mediated လမ်းကြောင်း (ဖြစ်ပါတယ်Foresta et al, 2008).
ကျနော်တို့အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့-သွေးဆောင်ဒဏ်ရာ toendothelial ဆဲလ်တွေသွေးကြောလိင်တံ increasessynthesis နှင့် TGF-β1၏လွှတ်ပေးရန်၏အိပ်ရာ, endothelin နှင့် contractileprostanoids တန်းစီကြောင်းအဆိုပြုပေမယ့်မလျော့နည်းစေပါသည်။ အဆိုပါ endothelium တို့အားဤသို့သော biologicalinsults ၏ရလဒ်ကိုတိုးလာ extracellularmatrix အစစ်ခံ (fibrosis), ဆဲလ်ကျုံ့နှင့်တစ်ဦး inhibitionof ဆဲလ်ကြီးထွား (hypoplasia) မှဦးဆောင် thesmooth ကြွက်သား phenotype ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မယ်။ Fibrosis ထို့ကြောင့်ပြောင်းလဲ contractility contributeto နိုင်ပြီး vasculogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင်, (determinedclinically ကဲ့သို့) လိုက်နာမှုလျော့သွားသည်။
အန်ဒရိုဂျင် Tunica အဘိဓါန် Albuginea ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသမာဓိနှင့် connective တစ်ရှူး Matrix Fibroelastic Properties ကိုထိန်းသိမ်းပါ
Shen et al (2003နဂိုအတိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ comparedwith သည့်အခါ), castrated တိရိစ္ဆာန်များအတွက် Tunica albuginea ၏အထူတစ် significantreduction သရုပ်ပြခဲ့သည်။ နဂိုအတိုင်းတိရိစ္ဆာန်များမှာ Tunica elastic အမျှင် richin သည်, ဤကဲ့သို့သောအမျှင်များ၏ဗိသုကာပုံမှန်အစီအစဉ်များ showedtypical ။ ဆနျ့ကငျြ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် castrated အဆိုပါ Tunica albugineafrom ကော်လာဂျင်နှင့်အတူဤအအမျှင်၏ elastic fibersand အစားထိုး၏လျော့ချသိပ်သည်းဆပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင် penile Tunica albuginea ၏ maintenanceof ပုံမှန် ultrastructure များအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း authorsconcluded ။
approximately2-ခြံများက connective တစ်ရှူးအချိုးချောမွေ့ကြွက်သားအတွက် concomitantreduction နှင့်တကွ, extracellular matrix ကိုအတွက် amarked တိုးထုတ်လုပ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်သင်းတို့ကအန်ဒရိုဂျင် ablation (Takahashi et al, 1991; Traish et al, 1999, 2003Wespes et al () တစ်သျှူး fibroelastic ဂုဏ်သတ္တိများ compromisespenile တစ်ရှူးလိုက်နာမှုအတွက်လျော့ချရေးသည့်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, penile hemodynamics attenuates, 1990, 1991; Jevtich, 1991; Nehra et al, 1996) ။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ suggestedthat အန်ဒရိုဂျင် (expressionof တိုးတက်မှုနှုန်းအချက်များမှတဆင့် extracellular matrix ကို modulate ရှိNatoli et al, 2005) ။ ဤသည်, သို့သော်, နောက်ထပ် penile တစ်ရှူးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရ needto ။ ဏု features တွေအတွက် elastic အမျှင်များနှင့်အပြောင်းအလဲများအတွက်လျော့နည်း (အ Tunica albuginea functionof အဆိုပါ venoocclusive impairing အားဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု contributeto စေခြင်းငှါလူမျိုးခြား et al, 1996; Akkus et al, 1997) .Recent ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် (အန်ဒရိုဂျင်ကုသမှုပြီးနောက် venousleakage မှစွပ်စွဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် erectilefunction ၏ပွနျလညျထူထောငျ corroborated ပါပြီYassin et al, 2006; Kurbatov et al, 2008a,b) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက် erectile တစ်ရှူးဗိသုကာထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် androgensplay တစ်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောခန္ဓာကိုယ် penile အာရုံကြော, vascularendothelium, trabecular ချောမွေ့ကြွက်သား, connective တစ်ရှူး matrix, နှင့် Tunica albuginea ၏ androgensregulate ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုကြောင်းအကြံပြုတည်ရှိနေသေးသည်။ ထို့ပြင်အန်ဒရိုဂျင် adipocytes သို့ trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားများနှင့် inhibitdifferentiation သို့ differentiationof ရှေ့ပြေးဆဲလ်တွေထိန်းညှိ။ လူသားမြားသညျတှငျ, အန်ဒရိုဂျင်) ထိုသို့သော 1 အဖြစ်လက်တွေ့ရောဂါဗေဒအတွက်လိင်တံနှင့်2၏မလုံလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသူ့ဟာသူ deficiencymanifests) ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်သင်းသို့မဟုတ် antiandrogentherapy နှင့်အတူ hyperplasiamanaged ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ်နှင့်အတူ erectile function ကိုအတွင်းလူနာများ၏အရှုံး။ hypogonadal လူနာ improvessexual function ကိုအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ဖြည့်စွက်။ အတူတူ preclinical ဒေတာ withthe ဒါတွေကလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်, testosterone ဟော်မုန်းတစ်ရှူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒြပ်စင်ပြုပြင်နှင့် penile hemodynamics တိုးတက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်း View (18K):
ပုံ3။ အန်ဒရိုဂျင်အက်ရှင်နှင့် penile တစ်ရှူးများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ဟော်မုန်း, အာရုံကြောများနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် function ကိုအကြားဆက်စပ်မှုတွေ။ ဒီအမူဘောင် erectile function ကိုဇီဝဖြစ်စဉ်, အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကကမကထပြုခဲ့အာရုံကြောသမာဓိရှိလိုအပ်သည်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်ကိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ မှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်အရောင်ကိန်းဂဏန်း www.andrologyjournal.org.
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အန်ဒရိုဂျင် erectiletissue ဗိသုကာထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ (ပုံ 3), နှင့် erectile ဇီဝြဖစ်စဉ် penile အာရုံကြော function ကို bymodulating နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံချောကြွက်သား, endothelium နှင့် connective တစ်ရှူး matrix အဖြစ်ဇီဝဖြစ်စဉ် integrityof နှင့်လမ်းကြောင်းအချက်ပြ။
ဤလုပ်ငန်းကိုဇီဝဓါတုဗေဒ andUrology, ဆေးပညာဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, ဘော်စတွန်, မက်ဆာချူးဆက်၏ဦးစီးဌာနများကထောက်ခံခဲ့သည်။
ဤစာတမ်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ Aprilပြီ ၁၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အထူးစာတမ်းဖတ်ပွဲ“ အမျိုးသားလိင်နှင့်ဟော်မုန်းကျန်းမာရေးအတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ” ၏တင်ပြချက်အပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအန္ဒြိုဂျယ်လ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်သည့်တင်ပြချက်မှတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Traish အတိုင်ပင်ခံနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးဆက်ဆံရေး withBayer AG ကရှိပါတယ်။
Akishita M က, Hashimoto က M, Ohike Y ကို, Ogawa S က, Iijima K ကို eto M က, Ouchi Y. အနိမျ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအမျိုးသားများတွင် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုလွတ်လပ်သောပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Hypertens Res။ 2007; 30: 1029 -1034 ။[CrossRef][Medline]
Akkus အီး, Carrier S၊ Baba K၊ Hsu GL၊ Padma-Nathan H, Nunes L, Lue TF ။ လိင်တံ၏ tunica albuginea တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ - Peyronie ၏ရောဂါ၊ အိုမင်းခြင်းနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း၏သက်ရောက်မှု။ br J ကို Urol။ 1997; 79: 47 -53 ။[Medline]
Andersson Ke, penile စိုက်ထူ၏ Wagner G. အဇီဝကမ္မဗေဒ။ Physiol ဗြာ။ 1995; 75: 191 -236 ။[အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Armagan တစ်ဦးက, Hatsushi K ကို Toselli P. ကြွက်များတွင် penile dorsal အာရုံကြောများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိရှိအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2007; 20: 73 -78 ။[CrossRef][Medline]
Aversa တစ်ဦးက, Isidori လေး, Spera, G, Lenzi တစ်ဦးက, Fabbri ဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့အေအန်ဒရိုဂျင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် sildenafil မှလိုဏ်ဂူ vasodilation နှင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ Clin Endocrinol (Oxf)။ 2003; 58: 632 -638 ။[CrossRef][Medline]
baba K ကို Yajima M က, Carrier က S, Akkus အီး, Reman J ကို, Nunes L ကို, Lue TF, ကြွက် Corpus cavernosum နှင့် dorsal အာရုံကြောအတွက် NADPH diaphorase-စွန်းအာရုံကြောအမျှင်များ၏အရေအတွက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ Iwamoto တီ Effect ။ Urology။ 2000a; 56: 533 -538 ။[CrossRef][Medline]
baba K ကို Yajima M က, Carrier က S, မော်ဂန် DM, Nunes L ကို, Lue TF, Iwamoto တီ testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ပါဝင်သောအာရုံကြောအမျှင်များနှင့်ကြွက်လိင်တံအတွက် erectile တုံ့ပြန်မှုပြုပြင်နှောင့်နှေး။ BJU Int။ 2000b; 85: 953 -958 ။[CrossRef][Medline]
Bhasin S က, တေလာ WE, Singh က R ကို, Artaza J ကို, Sinha-Hikim ငါ Jasuja R ကို, Choi H ကို, Gonzalez-Cadavid အဲန်အက်ဖ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏ယန္တရားများ: အန်ဒရိုဂျင်အက်ရှင်များ၏ပစ်မှတ်အဖြစ် mesenchymal pluripotent ဆဲလ်။ J ကို Gerontol။ 2003; 58: M1103 -M1110 ။
Bivalacqua တီဂျေ, Musicki B, usta MF, ချန်ပီယံ HC, Kadowitz PJ, ဘားနက် AL, Hellstrom WJ ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Endothelial နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ဗီဇကုထုံး။ Curr Pharm Des။ 2005; 11: 4059 -4067 ။[CrossRef][Medline]
Bivalacqua တီဂျေ, Rajasekaran M က, ချန်ပီယံ HC, ဝမ် R ကို, Sikka SC, Kadowitz PJ, Hellstrom WJ ။ အဆိုပါကြောင်အတွက် pharmacologically သွေးဆောင် penile စိုက်ထူအပေါ်သင်း၏လွှမ်းမိုးမှု။ J ကို Androl။ 1998; 19: 551 -557 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Bivalacqua တီဂျေ, usta MF, ချန်ပီယံ HC, Kadowitz PJ, Hellstrom WJ ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် Endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှု: erectile ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ရောဂါအတွက် endothelium ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Androl။ 2003; 24 (6 ပျော့ပျောင်း): S17 -S37 ။[အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Foresta ကို C, Caretta N ကို, Lana တစ်ဦးက, De Toni L ကို, Biagioli တစ်ဦးက, Ferlin တစ်ဦးက, hypogonadal ယောက်ျားအတွက် endothelial progenitor ဆဲလ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏ Garolla အေလျှော့ချအရေအတွက်ကို။ J ကို Clin Endocrinol Metab။ 2006; 91: 4599 -4602 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Foresta ကို C, Zuccarello: D, De Toni L ကို, Garolla တစ်ဦးက, Caretta N ကို, Ferlin အေအန်ဒရိုဂျင်တစ်ခုအန်ဒရိုဂျင် receptor-mediated လမ်းကြောင်းမှတဆင့် endothelial progenitor ဆဲလ်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ Clin Endocrinol (Oxf)။ 2008; 68: 284 -289 ။[Medline]
Gentile V, Modesti A, La Pera, G, Vasaturo F, Modica A, Prigiotti G, Di Silverio F, Scarpa S. Peyronie ၏ရောဂါနှင့် veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် Ultrastructural နှင့် immunohistochemical စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ J ကို Androl။ 1996; 17: 96 -103 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Giuliano က F, Tostain J ကို, ရော့စီဃ Testosterone နဲ့အထီးလိင်: အခြေခံသုတေသနနှင့်လက်တွေ့ဒေတာ။ prog Urol။ 2004; 14: 783 -790 ။[Medline]
Goyal HO, Braden TD, ချက်ပြုတ် PS, Szewczykowski MA, Williams က CS, Dalvi P ကို, ဝီလျံ JW ။ estrogen receptor alpha ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိင်တံထဲမှာအီစထိုဂျင်-သွေးဆောင်မူမမှန် mediates ။ များပြားအောင်လုပ်ခြင်း။ 2007a; 133: 1057 -1067 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Goyal HO, Braden TD, Williams က CS, Dalvi P ကို, Mansour က M, Williams က JW ။ ကြွက်လိင်တံထဲမှာအဆီဆဲလ်များအီစထိုဂျင်-သွေးဆောင်ပုံမှန်မဟုတ်သောစုဆောင်းခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွား၏ဆက်စပ်အရှုံး penile ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလအတွင်းအီစထိုဂျင်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာမူတည်သည်။ Toxicol သိပ္ပံ။ 2005a; 87: 242 -254 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Goyal HO, Braden TD, Williams က CS, Dalvi P ကို, Mansour ဟာ MM, Williams က JW ။ တစ်ဦးထိုး-တုံ့ပြန်မှုလေ့လာမှု: လိင်တံအတွက် morphological မူမမှန်ခြင်းနှင့် diethylstilbestrol သို့မဟုတ် estradiol valerate နှင့်အတူမွေးကင်းစကလေးကုသအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် penile အရိုးကြွက်သားအမြဲတမ်းသော induction ။ J ကို Androl။ 2005b; 26: 32 -43 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Goyal HO, Braden TD, Williams က CS, Williams က JW ။ penile dysmorphogenesis ၏ induction အတွက်အီစရိုဂျင်၏အခန်းက္ပ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ များပြားအောင်လုပ်ခြင်း။ 2007b; 134: 199 -208 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Guay ကို AT ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှ endothelial ဆဲလ် function ကို၏ relation: ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ နံနက် J ကို Cardiol။ 2005; 96: 52M -56M ။[Medline]
Guay ကို AT ။ ED2: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု = endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Endocrinol Metab Clin N ကို Am။ 2007; 36: 453 -463 ။[CrossRef][Medline]
Haggestrom S က, Lissbrant လျှင်, Bergh တစ်ဦးက, Damber je ။ testosterone castrated ကြွက်များတွင် ventral ဆီးကျိတ်အတွက်သွေးကြော endothelial growth factor ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို Urol။ 1999; 161: 1620 -1625 ။[CrossRef][Medline]
Hatzichristou DG, Hatzimouratidis K ကို Apostolidis တစ်ဦးက, Ioannidis အီး, Yannakoyorgos K သည်, တစ်ဦး functional စိုက်ထူ၏ Kalinderis အေ Hemodynamic စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ တစ်ဦးအပြုသဘော intracavernosal ဆေးထိုးစမ်းသပ်နှင့်အတူလူနာအတွက်သွေးလွှတ်ကြောများနှင့် Corporate veno-occlusive function ကို။ EUR Urol။ 1999; 36: 60 -67 ။[CrossRef][Medline]
Hatzichristou DG, trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားသေံ၏ Saenz က de Tejada ငါ Kupferman S က, Namburi S က, Pescatori ES, Udelson: D, စတိန်းဗြဲခုနှစ်တွင် Vivo အကဲဖြတ်, intracavernous ဖိအားပြဋ္ဌာန်း pharmacocavernosometry နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်၎င်း၏လျှောက်လွှာ။ J ကို Urol။ 1995; 153: 1126 -1135 ။[CrossRef][Medline]
Heaton JP, Varrin SJ ။ penile စိုက်ထူထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်သင်းနှင့် exogenous testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Urol။ 1994; 151: 797 -800 ။[Medline]
ဟွမ် TI, Chen ကသူ, Tsai TF, လင်း YC ။ တစ်ဦးတည်း sildenafil မှတုံ့ပြန်ခြင်း hypogonadal လူနာတွေအတွက်အန်ဒရိုဂျင်နှင့် sildenafil ၏ပေါင်းလိုက်သောအသုံးပြုခြင်း။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2006; 18: 400 -404 ။[CrossRef][Medline]
Jevtich M က, Khawand နယူးယော့ပုံမှန်နှင့်သင်ျခြိုယောက်ျား၏ Corpus cavernosa အတွက် ultrastructural တွေ့ရှိချက်များ Vidic ခလက်တွေ့အရေးပါမှု။ J ကို Urol။ 1990; 143: 289 -293 ။[Medline]
Keast JR, Gleeson RJ, Shulkes တစ်ဦးက, မောရစ် MJ ။ ကြွက် vas deferens အတွက် terminal ကို axon သိပ်သည်းဆနှင့် neuropeptide စကားရပ်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုးကျိုးများ။ neuroscience။ 2002; 112: 391 -398 ။[CrossRef][Medline]
Kovanecz ငါ Ferrini MG, Vernet: D, Nolazco, G, Rajfer J ကို, Gonzalez-Cadavid အဲန်အက်ဖ်။ Pioglitazone အမျိုးအစား2များတွင်ဆီးချိုရောဂါတစ်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်တပ်ကြပ် veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ BJU Int။ 2006; 98: 116 -124 ။[CrossRef][Medline]
Krane RJ, စတိန်းငါ Saenz က de Tejada ဗြဲသင်ျခြို။ N ကို Engl J ကို Med။ 1989; 321: 1648 -1659 ။[Medline]
Kurbatov: D, Kuznetsky J ကို, Traish အေ testosterone သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နှင့်အတူ hypogonadal လူနာ erectile function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ J ကို Androl။ 2008a; 29 (6): 630 -637 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Kurbatov DG, Kuznetsky YY, Kitaev SV, Brusensky VA သို့။ veno-occlusive erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်၏ရည်ရွယ်ချက် visualization များအတွက်အလားအလာ tool အဖြစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2008b; 20: 192 -198 ။[CrossRef][Medline]
lu YL, Kuang L ကို, Zhu H ကို, Wu H ကို, ဝမ် XF, Pang YP, ဝမ် NJ, ယု DL ။ သင်းအောက်ပါအထီးကြွက်များတွင် aortic endothelium ultrastructure အတွက်အပြောင်းအလဲများ, 5alpha-reductase inhibitors ၏ Testosterone နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူအစားထိုး။ အာရှ J ကို Androl။ 2007; 9: 843 -847 ။[CrossRef][Medline]
Lue TF, Tanagho EA ၏။ စိုက်ထူခြင်းနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ pharmacological စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။ J ကို Urol။ 1987; 137: 829 -836 ။[Medline]
Mersdorf တစ်ဦး, ရွှေပန်းထိမ်ကို PC, Diederichs W က, Padula, CA, Lue TF, Fishman IJ, Tanagho EA ၏။ Ultrastructural သင်ျခြို penile တစ်ရှူးများတွင်ပြောင်းလဲ: 65 လူနာတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ J ကို Urol။ 1991; 145: 749 -758 ။[Medline]
Meusburger သည် SM, Keast JR ။ Testosterone နဲ့တွင် nerve growth factor စသည်တို့အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတင်ပါးဆုံတွင်း ganglion ဆဲလ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် neurotransmitter စကားရပ်အပေါ်ကွဲပြားပေမယ့်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ neuroscience။ 2001; 108: 331 -340 ။[CrossRef][Medline]
Mills က TM, အဆို့ VS, Wiedmeier VT ။ ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူ၏ hemodynamics အပေါ်သင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ Biol Reprod။ 1994; 51: 234 -238 ။[Abstract]
မွန်း DG, Lee က KC ကင်မ် YW, Park က HS, ချို hy, Kim က JJ ။ Corpus cavernosum တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်များနှင့်ချောမွေ့ကြွက်သားဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ် TCDD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2004; 16: 224 -230 ။[CrossRef][Medline]
မွန်း DG, Sung DJ သမားကင်မ် YS, Cheon J ကိုကင်မ် JJ ။ အနည်းတစ်ဦးကယုန်အတွက်တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်၏အပြောင်းအလဲတချို့မှတဆင့် penile စိုက်ထူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2001; 13: 309 -316 ။[CrossRef][Medline]
Moreland RB ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Pathophysiology: လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် trabecular ဖွဲ့စည်းပုံ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုနှင့် functional ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2000; 12 (ပျော့ပျောင်း 4): S39 -S46 ။[CrossRef][Medline]
Mulhall JP, Daller M က, Traish လေး, Gupta က S, ပန်းခြံ K ကို Salimpour P ကို, Payton TR, Krane RJ, စတိန်းဗြဲ Intracavernosal forskolin: စံ 3-အေးဂျင့် pharmacotherapy မှခံနိုင်ရည် vasculogenic ခွန်အားမရှိခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Urol။ 1997; 158: 1752 -1758 ။[CrossRef][Medline]
Mulhall JP, အန်ဒါဆင်က M, က Parker အမ် Congruence ပြောင်းလဲနေသောပြုတ်ရည် cavernosometry စဉ်အတွင်း veno-occlusive parameters တွေကိုအကြား: cavernosography ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအကဲဖြတ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2004; 16: 146 -149 ။[CrossRef][Medline]
Muller SC, Hsieh က JT, Lue TF, Tanagho EA ၏။ သင်းနှင့်စိုက်ထူ။ တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှု။ EUR Urol။ 1988; 15 (1-2): 118 -124 ။[Medline]
Musicki B, ဘားနက် AL ။ ဆီးချို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် Endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2007; 19: 129 -1138 ။[CrossRef][Medline]
Natoli AK, Medley TL, Ahimastos AA ကို, Drew BG, Thearle DJ သမား, Dilley RJ, Kingwell BA ဘွဲ့။ လိင် steroids လူ့ aortic ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ် matrix ကိုပရိုတိန်းအစစ်ခံနှင့် matrix ကို metalloproteinase စကားရပ် modulate ။ သွေးတိုး။ 2005; 46: 1129 -1134 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Nehra တစ်ဦးက, Azadzoi KM, Moreland RB, Pabby တစ်ဦးက, Siroky ကို MB, Krane RJ, စတိန်းငါ Udelson ဃ Cavernosal ချဲ့ထွင် vasculogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် trabecular တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်ခန့်မှန်းထားတဲ့အနေနဲ့ erectile တစ်ရှူးစက်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Urol။ 1998; 159: 2229 -2236 ။[CrossRef][Medline]
Nehra တစ်ဦးက, စတိန်းငါ Pabby တစ်ဦးက, Nugent M က, Huang က YH, de las Morenas တစ်ဦးက, Krane RJ, Udelson: D, Saenz က de Tejada ငါ Moreland RB ။ သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်၏ mechanisms: Corporation function ကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာတစ်အလားအလာ clinicopathological ဆက်စပ်မှု။ J ကို Urol။ 1996; 156: 1320 -1329 ။[CrossRef][Medline]
Palese MA, Crone JK, ဘားနက် AL ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တစ်ဦးက castrated mouse ကိုမော်ဒယ်။ J ကို Androl။ 2003; 24: 699 -1703 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Persson, C, Diederichs W က, Lue TF, ယန်း TSB, Fishman IJ, Mclin P ကို, Tanagho EA ၏။ လက်တွေ့သွေးလွှတ်ကြောအကဲဖြတ်နှင့်အတူပြောင်းလဲ penile ultrastructure ၏ဆက်စပ်မှု။ J ကို Urol။ 1989; 142: 1462 -1468 ။[Medline]
Rajfer J ကို, Rosciszewski တစ်ဦးက, သင်ျခြိုယောက်ျားအတွက် Corporation သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်၏ Mehringer အမ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ J ကို Urol။ 1988; 140: 69 -71 ။[Medline]
ရော်ဂျာသည် RS, Graziottin TM, Lin က CM, ကံ YW, Lue တီ Intracavernosal သွေးကြော endothelial growth factor (VEGF) ဆေးထိုးခြင်းနှင့် adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated VEGF ဗီဇကုထုံးကြွက်များတွင် venogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတားဆီးခြင်းနှင့် reverse ။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2003; 15: 26 -37 ။[CrossRef][Medline]
penile ချောမွေ့ကြွက်သား contractility ၏စည်းမျဉ်းများအတွက် Saenz က de Tejada ဗြဲ Molecular ယန္တရားများ။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 2002; 14 (ပျော့ပျောင်း 1): S6 -S10 ။[CrossRef][Medline]
Saenz က de Tejada ငါ Carson အမတ်, de las Morenas တစ်ဦးက, စတိန်းငါ Traish လေး။ Endothelin: လူ့ penile Corpus cavernosum အတွက်ဒေသခံပေါင်းစပ်, လှုပ်ရှားမှုနှင့်အဲဒီ receptor အမျိုးအစားများ။ နံနက် J ကို Physiol။ 1991a; 261 (4 PT 2): H1078 -H1085 ။[Medline]
Saenz က de Tejada ငါ Moroukian P ကို, Tessier J ကိုကင်မ် JJ, စတိန်းငါ Frohrib ဃ Trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားလိင်တံ၏ capacitor function ကို modulates ။ တစ်ယုန်မော်ဒယ်ပေါ်လေ့လာရေး နံနက် J ကို Physiol။ , 1991b; 260 (5 PT 2): H1590 -H1595 ။[Medline]
Shabsigh R, Raymond JF, Olsson CA, O'Toole K, Buttyan R. Androgen induction in ကြွက်လိင်တံတွင် induction ။ Urology။ 1998; 52: 723 -728 ။[CrossRef][Medline]
Shen ZJ, Zhou XL, Lu က YL, ချန် ZD ။ penile ultrastructure အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့မှု effect ။ အာရှ J ကို Androl။ 2003; 5: 33 -36 ။[Medline]
Simpson က S, မာရှယ် FHA ။ castrated တိရိစ္ဆာန်များအတွက် nervi erigentes လှုံ့ဆော်၏သက်ရောက်မှုတွင်။ QJ Exp Physiol။ 1908; 1: 257 -259 ။[အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Singh က R ကို, Artaza ဖြစ်မှု, တေလာ WE, Braga M က, ယွမ် X ကို, Gonzalez-Cadavid အဲန်အက်ဖ်, Bhasin အက်စ် testosterone 3T3-L1 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ adipogenic ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်: beta ကို-catenin နှင့် T-ဆဲလ်အချက်4မေလနှင့်အတူအန်ဒရိုဂျင် receptor ရှုပ်ထွေးသော၏နျူကလီးယား့စ နှိမ့်ချ-ထိန်းညှိ adipogenic ကူးယူအချက်များမှအချက်ပြလမ်းလွှဲ canonical Wnt ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2006; 147: 141 -154 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Singh က R ကို, Artaza ဖြစ်မှု, တေလာ WE, Gonzalez-Cadavid အဲန်အက်ဖ်, Bhasin အက်စ်အန်ဒရိုဂျင် myogenic ကွဲပြားခြားနားမှုကိုလှုံ့ဆော်ကာအန်ဒရိုဂျင် receptor-mediated လမ်းကြောင်းမှတဆင့် C3H 10T1 /2pluripotent ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ adipogenesis တားစီး။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2003; 144: 5081 -5088 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
ရှောလမုန်မင်း H ကို, က Man JW, Jackson က G. အ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစိတ်ရှည်: endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုဘုံပိုင်းခြေဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံး။ 2003; 89: 251 -253 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
ဆူဇူကီး N ကို, Sato Y ကို, Hisasue S က, Kato R ကို, ဆူဇူကီး K ကို testosterone ဟော်မုန်း၏ Tsukamoto တီ Effect intracavernous ဖိအားအပေါ်အထီးကြွက်များတွင် medial preoptic ဧရိယာနှင့်လိုဏ်ဂူအာရုံကြောများ၏လျှပ်စစ်ဆွနှင့်အတူရူးနှမ်း။ J ကို Androl။ 2007; 28: 218 -222 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Takahashi Y ကို, Hirata Y ကို, Yokoyama S က, Ishii N ကို, Nunes L ကို, Lue TF, Tanagho EA ၏။ castrated ခွေးအတွက် acetylcholine ၏ intracavernous ဆေးထိုးဖို့ penile erectile တုံ့ပြန်မှုအရှုံး။ တိုဟိုကု J ကို Exp Med။ 1991; 163: 85 -91 ။[Medline]
Traish တစ်ဦးကကင်မ် N. penile စိုက်ထူအတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍ: Corpus cavernosum ဖွဲ့စည်းပုံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ function ကို။ J ကိုလိင် Med ။။ 2005; 2: 759 -770 ။[CrossRef][Medline]
Traish လေး, စတိန်းငါကင်မ် NN ။ Testosterone နဲ့ erectile function ကို: အခြေခံသုတေသနကနေအန်ဒရိုဂျင်မလုံလောက်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုလက်တွေ့ပါရာဒိုင်းရန်။ EUR Urol။ 2007; 52: 54 -70 ။[CrossRef][Medline]
Traish လေး, Guay ကို AT ။ လူသားတွေအတွက် penile စိုက်ထူများအတွက်အရေးပါအန်ဒရိုဂျင်ရှိပါသလား အဆိုပါလက်တွေ့နှင့် preclinical သက်သေအထောက်အထားဆန်းစစ်ပါ။ J ကိုလိင် Med။ 2006; 3: 382 -404 ။[Medline]
Treish AM၊ Munarriz R၊ O'Connell L၊ Choi S, Kim SW, Kim NN, Huang YH, Goldstein I. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသတ္တဝါမော်ဒယ်လ်အပေါ်သက်ရောက်မှု။ J ကို Androl။ 2003; 24: 381 -387 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Traish လေး, ပန်းခြံ K ကို Dhir V ကိုကင်မ် NN, Moreland RB တစ်ယုန်မော်ဒယ်အတွက် erectile function ကိုအပေါ်သင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုး၏တိန်းဗြဲအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1999; 140: 1861 -1868 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Traish လေး, Toselli P ကို, Jeong SJ ကင်မ် NN ။ အဆိုပါ orchiectomized ယုန်၏ penile Corpus cavernosum အတွက် Adipocyte စုဆောင်းခြင်း: အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့အတွက် veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အလားအလာယန္တရား။ J ကို Androl။ 2005; 26: 242 -248 ။[Abstract /အခမဲ့ စာသားအပြည့်အစုံ]
Udelson: D, Nehra တစ်ဦးက, Hatzichristou DG, Azadzoi K ကို Moreland RB, Krane RJ, Saenz က de Tejada ငါ penile hemodynamic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-ပြောင်းလဲနေသောဆက်ဆံရေး၏တိန်းဗြဲအင်ဂျင်နီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: penile hemodynamic နှင့်ကျောမှု erectile တုံ့ပြန်မှု၏အစိတ်အပိုင်း III ကို-လက်တွေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ int J ကိုသင်ျခြို Res။ 1998; 10: 89 -99 ။[CrossRef][Medline]
watts gf, KK, Stuckey BG Chew ။ အဆိုပါ erectile-endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှု Nexus: နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အခွင့်အလမ်းသစ်။ နတ် Clin Pract Cardiovasc Med။ 2007; 4: 263 -273 ။[CrossRef][Medline]
Wespes အီးလေး, Schiffmann S က, Deprierreux M က, Vanderhaeghen JJ, Schulman CC ကိုတတ်၏။ အစွမ်းထက်နှင့်သင်ျခြိုလူနာချောမွေ့ကြွက်သားမျှင်များ၏ Computerized ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Urol။ 1991; 146: 1015 -1017 ။[Medline]
တစ်ဦး distal သည်သွေးလွှတ်ကြောရောဂါဗေဒ: Wespes အီး, Raviv, G, Vanegas JP, Decaestecker ကို C, Petein M က, Danguy တစ်ဦးက, Schulman CC ကို, R. Corporation veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှု Kiss? J ကို Urol။ 1998; 160: 2054 -2057 ။[CrossRef][Medline]
Wespes အီး, Rammal တစ်ဦးက, Garbar C. Sildenafil သည် non-န: haemodynamic နှင့် morphometric လေ့လာမှုများ။ EUR Urol။ 2005; 48: 136 -139 ။[CrossRef][Medline]
Wespes အီး, Sattar AA ကို, Golzarian J ကို, Wery: D, Daoud N ကို, Schulman CC ကို။ Corporate veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အများစု intracavernous ကြွက်သားရောဂါဗေဒ။ J ကို Urol။ 1997; 157: 1678 -1680 ။[CrossRef][Medline]
Wespes အီး, Schiffmann S က, Depierreux M က, Vanderhaegan JJ, Schulman CC ကို။ intracavernous ချောမွေ့ကြွက်သားမျှင်တစ်လျှော့ချရေးနှင့်ပတ်သက်သော cavernovenous ယိုစိမ့်လား? int J ကိုသင်ျခြို Res။ 1990; 2: 30 ။
Yassin AA ကို, Saad က F, Traish အေ testosterone undecanoate သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နှင့်အတူလူနာများအနက်အချို့သာလျှင်အတွက် erectile function ကိုပြုပြင်: အမှုတစ်ခုစီးရီးကတင်ပြထားပါတယ်။ J ကိုလိင် Med။ 2006; 3: 727 -735 ။[CrossRef][Medline]